SMOOTH-Q2: Ny gimbal any am-paosin'i Zhiyun efa misy | Vaovao momba ny gadget
Ny sehatry ny gimbal dia nitombo nandritra ny fotoana kelikely ary misy safidy maro samihafa. Zhiyun dia mamela antsika amin'ny endriny manokana an'ity vokatra ity, natao mba hahafahantsika mahazo horonantsary milamina sy avo lenta. Manolotra ny gimbal SMOOTH-Q2 ny orinasa amin'ny fomba ofisialy, izay hanampy antsika rehefa miresaka horonantsary kalitao milamina.
Na dia miavaka amin'ny habeny kely aza ity SMOOTH-Q2 ity. Satria ny orinasa dia mamela antsika modely maodelim-paosy, mampiasa sy fitaterana tena ahazoana aina sy tsotra amin'ny fotoana rehetra. Ka ho an'ny maro dia safidy mahaliana indrindra io.
Tsy toy ny maodely hafa eny an-tsena, ity Zhiyun SMOOTH-Q2 ity dia efa tonga amin'ny habe mihena. Noho izany dia tsy mila mamoritra na manitatra azy io isika rehefa hampiasa azy io. Manana halava 204 mm, izay manamora ny fitondrana azy miaraka amintsika na aiza na aiza. Afaka mitondra izany ao anaty kitapo miaraka amin'ny fiononana lehibe isika. Ankoatr'izay, vita amin'ny vatan'ny aliminioma, dia maodely tena matanjaka izy io, ary ny firakotra silônaly dia mampahazo aina azy ny mitazona rehefa mila mampiasa azy isika.
Lafiny iray lehibe manandanja an'ity gimbal ity koa ny hoe mora be ampiasaina. Satria manana fomba fampiasana marobe izy, izay mifanaraka amin'ny toe-javatra isan-karazany, ary afaka mifamadika amin'ny maody isika amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanindriana bokotra tokana. Ankoatr'izay, ny orinasa dia nanolotra maody vaovao amin'ity gimbal ity, mba hananan'ny mpampiasa fampiasa fampiasana maro hafa. Ny maody vaovao indrindra dia ny Mode POV, izay ahafahanao mamorona rakipeo 360-degre amin'ny famaky telo, ho an'ny vokatr'izany.
Afaka manao izany isika ampiasao ity Zhiyun SMOOTH-Q2 ity amin'ny telefaona Android sy iPhone Amin'ny fomba tsotra. Izy io dia namboarina mba hiasa tsara amin'ireo rafitra miasa roa amin'ity lafiny ity. Na dia miankina amin'ny maodely manokana aza ny sasany amin'ireo lahasa, noho izany dia tokony hifampidinika foana ireo masontsivana, mba hahafantarana izay fomba na fiasa azo ampiasaina amin'ny tranga tsirairay amin'ity gimbal sonia ity. Amin'ny ankapobeny dia tsy zavatra manome olana izany, koa afaka mankafy mora foana ny fomba sy ny fiasa maro ananany isika.
Tsotra ny fampiasana azy io, araka ny efa noresahintsika, hita taratra amin'ny endrika ihany koa izany. Amin'ity SMOOTH-Q2 ity dia hitantsika amin'ny fotoana rehetra fa mora ny mametraka azy io amin'ny fanohanana hampiasa azy. Mora ihany koa ny manala ny telefaona rehefa vitantsika ny mampiasa ny gimbal na ahoana na ahoana. Tsy handray na inona na inona hanaovana an'io hetsika io, izay mandray anjara amin'ny fampiasana azy io amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Ny lanja farany ambony manohana azy amin'ity tranga ity dia 260 grama, izay tsy hihoatra ny mahazatra, satria maivana kokoa ny telefaona, saingy tsara ho fantatra fa io no fetra avelan'ny gimbal.
Ho fanampin'izay, azontsika atao ahodino mora foana ny toeran'ny telefaona amin'ity gimbal ity. Amin'izany no ahafahantsika mandray an-tsoratra ny karazan-dahatsary rehetra, na mitsangana na mitsivalana. Raha te handraikitra ny tenantsika koa isika na hanao fampitana mivantana mampiasa ny gimbal an'i Zhiyun dia azo atao izany. Zavatra iray azo antoka fa mahaliana ny mpampiasa maro, izay te-ho afaka mamorona horonantsary mivantana izay milamina tokoa ary mampifanaraka azy isaky ny fotoana. Lafiny iray lehibe hafa amin'ity maodelin'ny marika sinoa ity, noho izany.
Araka ny hitanao, ity SMOOTH-Q2 avy amin'ny marika sinoa ity Izy io dia aseho ho gimbal feno sy marobe, izay ho azontsika ampiasaina amin'ny toe-javatra isan-karazany. Ny habeny sy ny fampiasana azy io dia mahatonga azy io ho safidy tsara handinihana amin'ity sehatra tsena ity ho an'ny maro. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity gimbal ity ianao sy ny fomba azonao atao amin'izany, midira ny tranokalan'ny orinasa. Ho hitanao eto ny angona rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SMOOTH-Q2: gimbal any am-paosin'i Zhiyun
Ity ilay GoPro Hero 8 Black vaovao, ny kojakoja misy azy ary ny Max